လာမယ့် မေလ ထဲမှာထွက်ရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့ LG ရဲ့ G7! – AsiaApps
March 14, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on လာမယ့် မေလ ထဲမှာထွက်ရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့ LG ရဲ့ G7!
LG ရဲ့ G7 ဟာလာမယ့် ဧပြီလကုန် (သို့) မေလအစောပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိတော့မယ် သတင်းတွေကတော့ လွန်ခဲ့ရက်အနည်းငယ်ထဲကထွက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမှာ စတင်ဖြန့်ချီရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ ကိုရီးယားငွေကြေး ဝမ် ၁ သိန်း (USD 900 ဝန်းကျင်) ရှိမှာဖြစ်မယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
A rumor image of LG G7
G7 ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၆ လက်မကျော်ရှိနေပြီး Organic light emitting diode (OLED) display နဲ့အတူရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ V30 ThinQ ရဲ့ AI camera feature ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Snapdragon 845 chipset ပါဝင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အပေါ်ဘက်ဟာ Apple ရဲ့ iPhone X တုန်းကလို Notch ဒီဇိုင်းလေးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီထက်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်တဲ့ ဖုန်းရဲ့ Specification ဟာတော့မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာထွက်ရှိလာဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မေလ အတွင်းမှာပဲ G7 Plus ဟာ G7 နဲ့အတူ ထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံကြားမိပြန်ပါတယ်။ ကွာဟချက်တော့ RAM နဲ့ Storage ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်နေမှာပါ။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့အတူမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Mi Mix 2s!